Hyperlapse Pro ကိုရရှိနိုင် Mac | ငါက Mac ကပါ
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ Hyperlapse Pro ကို Mac အတွက်ရရှိနိုင်
Jordi Gimenez | | Mac OS X ကို, Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ
ယနေ့သုံးစွဲသူများအသုံးပြုသောဆော့ဗ်ဝဲကိရိယာတစ်ခုမှာရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်ပြုပြင်ခြင်းကိုတည့်မတ်ရန်၊ တစ်ခါတစ်ရံအလွန်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည့်မှုန်ဝါး။ မတည်မငြိမ်ဖြစ်သောအသွင်အပြင်ကိုတည်းဖြတ်ခြင်းဖြင့်တိုးတက်သည်။ လက်ရှိစမတ်ဖုန်း၏အမှု၌ အထူးသဖြင့် (ယနေ့ငါအသုံးပြုသော iPhone) ၏သူတို့၏ကင်မရာများသည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်နှင့်အမျှထူးခြားသောတိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာရရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သည်။
အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများသို့မဟုတ်ပင် လှုပ်ရှားမှုကင်မရာများ ဒီနေ့သူတို့ဘယ်လောက်ခေတ်မီတယ်၊ ဒီပြproblemနာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံများ (သို့) ဗွီဒီယိုများမှာရှောင်ရှားဖို့ဒါမှမဟုတ်ဖုံးကွယ်ဖို့ပိုခက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီပြfailနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်ဆော့ဗ်ဝဲတစ်ခုရှိတယ်၊ အဲဒါတစ်ခုဖြစ်တယ်။
Mac အသုံးပြုသူများအတွက် application များနှင့်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) အချို့ပင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ပုံရိပ်များသို့မဟုတ်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပုံမှန်တုန်ခါမှုများကိုဖယ်ရှားပေးရန်ဤ 'retouching' လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Mac သုံးစွဲသူများအတွက် Windows တွင်အသုံးပြုရန်သင်သိထားပြီးဖြစ်သော Microsoft tool ကိုရရှိနိုင်သည် Hyperlapse Pro ကိုခေါ်။ ,.
ဤကိရိယာသည်ပရိုဂရမ်ဒါရိုက်တာ Josh Weisberg မှကောင်းစွာရာထူးတိုးသည်။
Mac တွင်အပျော်တမ်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုရန်အတွက်ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးကိရိယာအချို့ရှိပြီးအခြားအချိန်များ၌အသုံးချပရိုဂရမ်များလည်းရှိပါသည်။ သို့သော်ဘာမျှ Hyperlapse Pro ကဲ့သို့အရည်နှင့်ခေတ်မီဆန်းပြားသည်
ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ဒီဆော့ဗ်ဝဲရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုစမ်းသပ်ဖို့အခွင့်အရေးရမယ် အကြီးအကျယ်ကုန်ကျသည် 50 ဒေါ်လာ။ အကယ်၍ သင်သည် Mac အတွက်ဤ Hyperlapse Pro ကိုကြိုးစားလိုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည် ဒီမှာကနေစမ်းသပ်မှုဗားရှင်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ » မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ Hyperlapse Pro ကို Mac အတွက်ရရှိနိုင်
ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုပြသသည့်အခါ App Store သည်ယခုထက်မြက်လာပြီဖြစ်သည်
Apple Watch2ကိုစတင်တပ်ဆင်မည်ဖြစ်သည်